Maitiro ekuchengeta hukama ari kure | Ruzivo runoshanda kumunhu wese.
Maitiro ekuchengetedza hukama kure
Hukama kune chinhambwe vazhinji vanoona sezvisingaiti, asi zvekuita kana rudo rwako ruchigara kure newe.
Kuomerwa kunoitika kunyangwe kune avo vanogara pamwe, uye hukama huri kure kubva kune mumwe nemumwe hahusiku hwakaoma moyo.
Ungachengeta sei hukama uri kure:
Iwe unofanirwa kurarama hupenyu hwakazara nguva dzese, uye kwete panguva dzemisangano dzakamirirwa kwenguva refu nemudiwa wako. Kana mudiwa asipo padyo, kune vanhu vazhinji hupenyu hunova hunonetesa, grey uye kusurukirwa.
Iwe haufanire kubvumira izvi, kugutsa hupenyu hwako nezviitiko uye manzwiro. Nzwisisa kuti zvese zvakanaka, nyangwe mudiwa wako asiri padyo.
Ramba uchibata kuburikidza nefoni, skype, magariro social. Uye zvakare edza kuti usakanganwe kuti kuwedzera kune wako waunoda, une hama neshamwari dzinoda newewo.
Iva nemunhu, ita zvisikwa, shandisa nguva uine shamwari inofara.
Gamuchira iyo nzvimbo inokuparadzanisa iwe. Vazhinji vanogona kuve negodo nehutsva uye kuomarara kwemanzwiro ako, nekuti panguva yekuparadzaniswa iwe unokwanisa kuwana kubhoikana uye musangano wega wega unogamuchirwa iwe.
Nakidzwa nenguva dzepedyo uye usanetseka kuti ndeipi nzvimbo inokuparadzanisa.
Rega kubiridzira pachako kuti mudiwa wako anokubiridzira. Kunyengera hakugone kudzivirirwa kunyangwe nevaya vanogara pamwechete. Nhamba dzinoratidza kuti iko kunyepedzera kwekuda kupandukira uko kuri kupomhodza kuparara muhukama.
Kutama kunogona kukonzeresa kusvinura kwako, uye uchafadza mudiwa wako wausingawanzoona. Unogona kukomborera mumweya wako nehunhu izvo zvaari iye asina.
Chinhu chikuru chinokanganisa kwehukama hwekureba kushomeka kwerudo. Misangano isingaitwe inoitirwa kukurukurwa kwenhau, zvepabonde uye kujekeswa kwehukama. Ipa mumwe nemumwe zviduku zvakashamisa, makadhi uye zvinhu zvakagadzirwa nemaoko.
Panguva yemisangano, idya kudya kwemanheru munzvimbo dzerudo, enda ku cinema, famba pasi penyeredzi.
Ko hukama huri chinhambwe kuburikidza neVkontakte unogoneka?
Nzira yekuchengetedza ukama nemusikana, kana tikararama mumaguta akasiyana?
Zvinokwanisika kuda munhu kubva paupenyu hwako hwose here?
Hukama hwekuda-kuzivikanwa mumisangano - rudzii rwehukama?
Posted in kudanana, rudo, ukama
Mibvunzo ye60 mu database yakagadzirwa mu 0,440 masekondi.